Home Wararka RW Rooble oo xayiraad dhaqaale ku soo rogay saaxiibada Farmaajo & hay’addaha...
RW Rooble oo xayiraad dhaqaale ku soo rogay saaxiibada Farmaajo & hay’addaha taageersan
Ra’iisul Wasaaraha Rooble ayaa qoraal uu soo Saaray ku amray wasaaradda maaliyadda inaysan bixin karin lacag uusan isaga soo saxiixin, islamarkaana aan ogolaansho looga heysan.
Talabadaan ayaa albaabka ka soo xirayso saaxibada Farmaajo iyo hay’adda taageersan qorshihiisa. Waa markii u horeeysay oo the madaxweyne Soomaali ah sidaa loo bahdilo, iyada oo la isticmaalayo awooda dolwada oo dabada kula jirto taageero qabiil.
Dhanka kale, Warqadda amarka lagu bixiyey oo loo diray wasaaradda Maaliyadda 9-kii bishan ayaa waxaa sidoo kale la ogeysiiyey Xisaabiyaha guud, Guddoomiyaha Bankiga Dhexe iyo hanti dhowraha guud ee qaranka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale si gaar ah u xayiray in ogolaansho la’aantiisa la isticmaalo lacagta Hay’adda IMF ee qoondada Dowladda Federaalka ah ee loo yaqasan SDRs.
Ma jirto wax kale oo iska beddelay shaqada hay’adaha dowladda ee warqaddani ku socoto
Halkaan hoose ka akhriso warqadda uu Rooble u diray wasaaradda Maaliyadda
Khilaafka Max’ud Sayid & A. Madoobe oo cirka isku shareeray! A Madoobe oo go’aan gaaray?
[Sawiro] Xaaladda Guriceel oo kasii dartay & ciidan gudaha u galay...